Maxaa dhacaya hadii aad ku dhimatid Sweden? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxaa dhacaya hadii aad ku dhimatid Sweden?
La daabacay tisdag 27 december 2016 kl 15.50
Sanduuqa maydka (naxash). sawir: Sawirle: Mats Andersson/TT
Maxaa la sameeyaa hadii qof dhinto waddankan? Yaa bixiya kharashka aaska?
Waddanka Sweden waxa arimaha aaska maamula kaniisada, marka laga reebo Stockholm iyo Tranås halkaas oo dawlada hoose maamusho aaska. Kaniisada iyo dawladahan hoose waxay u xilsaaran yihiin in ay diyaariyaan meelo lagu aaso qofka dhinta. Eva Arbrandt Johonsson oo ah sharciyaqaan iyo gudoomiyaha ururka kaniisada Sweden ayaa sharaxaysa sida loo maamulo arimaha aaska, waxanay tidhi.
- Hawlaha aaska waxa ka mida in qof walba meel lagu aaso loo helo iyo in dhowr shaqo qofka dhinta loo qabto lacag la´aan. Howlahaas waxa ka mid ah xaabaal muddo 25 sanadood ah uu meydku ku jirayo , gubida meydka, gaadiidka qaadaya meydka, aasida iyo meesha lagu haynayo meydka inta aan la aasin iyo meesha lagu qabanayo tacsida oo aan ahayn meel diineed.
Kharashka lagu bixiyo dhulka lagu aasayo qofka, iyo maamulka arinta aaska waxa lagu bixiyaa lacag laga qaado dhammaan dadka waddanka ka shaqeeya, lacagtaas oo la siiyo kaniisada si ay ugu bixiyaan arimaha aaska. Cashuurtan ayaa u kala badan sida dadka lacagta soo gashaaay u kala badan tahay, laakiin qof walba waa in uu bixiyo 29,6 öre boqolkii karoonba. Qofka aan shaqeyn jirin, wax hanti ahna ka tegin dawlada hoose ayaa bixisa kharashka aaskiisa.
Kaniisada iyo dawladahan hoose waxa kale oo ay u xilsaaran yihiin in ay diyaariyaan meello lagu aaso dadka aan kiristenka ahayn. Eva Arbrandt Johonsson ayaa sharaxeysa arintan.
- Kaniisada Sweden waxa lagu waajibiyey in ay u diyaariso meello gaar ah dadka aan aaminsanayn diinta kristanka. Meellahaas oo ku yaala goobo gaar ah, waana wax siibadanaya in xabaalo gaar ah la sameeyo, sida kuwa tusaale ahaan muslimiinta.
Sheekh Axmed Xasan oo iimaam ka ah musaajid ku yaala xaafada Rinkeby ee magaalada Stockholm ayaanu ka wareeysanay arimaha aaska.
Dadka doonaya in lagu aaso waddan kale lagama bixilyo kharashka ku baxaya. Sidoo kale xabaasha qofku waxa uu ku jiraa 25 sanadood, ka dibna waa la furaa si loogu aaso qaf kale, waxase la ogol yahay in loo dheereyn karo wakhtiga qofku ku jirayo xabaasha hadii markaas loo iibiyo.
Waddankan dadku waxay ku dardaarmi karaan in maydkooda la gubo, hadii anay iyagu ku dardaarmina dadkooda ayaa go´aaminaya in la gubo ama in lagu aaso sanduuq meeydka. Hayeeshee lama ogala in ciida la dhigo marka la aasayo meeydka, sanduuq la´aan. Waakan Sheekh Axmed oo sharaxaad naga siinaya sida dadka loo aaso Sweden.
Wakhtiga ay qaadato in lagu aaso qof ayaa aad uga dheer inta lagu aaso dadka Somalia ku dhinta. Waxase khasab ah in bil gudaheed qofka lagu aaso Sweden. Sheekh Axmed Xasan ayaanu mar kale ka wareeysaney waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sida aasku u dhaco Somalia iyo sida uu u dhaco Sweden.